Semalt - Ahoana ny fijerena ny cybercafe?
Ny fonenan'ny MasterCard dia mamaky ao amin'ny Home Stop, Target, ary ireo mpivarotra goavam-be hafa voakasika ara-bakiteny avokoa. Amin'ny ankapobeny, ny voka-dratsin'ny fandoavam-bola dia mihoatra lavitra noho ny mpanjifa.
Tahaka izany, raha ny marina, mbola manakaiky kokoa ny tokantrano dia olana iray izay ahafahantsika rehetra mifehy ny mailaka. Ny olana ara-pahasalamana bebe kokoa dia eo amin'ny teboka avo indrindra amin'ny atidoha. Nangataka ny olana ara-pahasalamanao sy ny olana misy anao ianao, ary ny ankamaroany dia mifandray amin'ny mailaka.
Oliver King, mpitantana ny Success Successor Semalt , mifandray amin'ny manam-pahaizana momba ny fiarovana, izay naneho fihetsika tamim-pahalalana momba ny zava-nitranga, fomba fiasa sy toro-hevitra mba hitazonana ny halaviran-dàlana avy amin'ny loza any aoriana.
Ireo manam-pahaizana: Grayson Milbourne, Greg Foss, ary Paul Madsen.
Oliver King: Tamin'ny farany dia nividy PC iray hafa tamin'ny Windows 7 napetraka. Hatramin'io fotoana io dia nodiovina tamin'ny famolavolana fampiroboroboana iray aho - mahatsikaiky tokoa. Ny ankamaroan'ireto hafatra ireto dia manana safidy "tsy hanoratra" ho kitika. Indray mandeha izy ireo dia manana rohy roa miavaka. Noraisiko an-tsoratra isan'andro aho, ary mitaky fotoana be dia be ny fampiasam-bola, ary ny ampahany amin'ireo dokam-barotra mitovy amin'izany dia mbola miverina. Misy fomba tsara kokoa hanesorana an'ity bibikely ity?
Webroot: Ny famandrihana tsy misy soratra momba ny habetsahan'ny hafatra momba ny spam dia fitaka ary ampiasaina amin'ny hackers hanavaka raha toa ka mahazo adiresy imailaka" mivantana "izy ireo amin'ny mety ho fampitomboana spam.
LogRhythm: Amin'ny tranga sasany, ny spam dia mety tsy dia saro-pady loatra raha handratra. Na dia tsy ara-dalàna ho an'ny mpivarotra aza ny mandefa hafatra aminao rehefa avy nisintaka ianao, ny sasany dia tsy miraharaha an'izany ary manohy mandefa taratasy amin'ny toe-javatra rehetra.
Ny fomba fanao tsara indrindra hanesorana tanteraka an'ity spam ity dia ny fanaovana ankivy ny mailaka tsy mendrika. Izany dia hanolotra mailaka avy hatrany any amin'ny fandefasana fako anao.
Oliver King: Manana kaonty mailaka roa aho. Andro vitsy lasa izay, mazava ho azy fa nidaroka tamin'ny tranga tsy mety tamin'ny Gmail aho, ary ankehitriny dia alefa ao amin'ny kaonty CenturyLink miaraka amin'ny fampiroboroboana tsy am-piheverana manerana ny faritra maro. Ahoana no hanajanonako izany?
Webroot: Lazao ny hafatra ho toy ny spam na junk amin'ny programa Gmail. Ny fanaovana toy izany dia hanampy amin'ny fampihenana ny isan'ny spam izay azonao.
LogRhythm: Fomba tsara indrindra handinihana izany amin'ny alalan'ny fampiasana filtres. Google dia manana lahatsoratra mahafinaritra momba ny fomba fiasan'ny sivana sy ny fomba ahafahanao mampiasa azy ireo hamahana ny olana.
Oliver King: Nandritra ny volana vitsy lasa izay, naharay hafatra roa na efatra isan'andro aho avy amin'ny adiresy Rosiana. Mety te-hahafantatra aho hoe inona avy ireo hafatra ireo, na izany aza, mety ho tian'ny ankamaroan'izy ireo ny hahatonga azy ireo hifarana.
Webroot: Raha toa ka avy amin'ny adiresy mitovy amin'izany ireo hafatra ireo, dia tokony hanana fahafahana hanakana izany adiresy izany na hanamarina azy io toy ny fako na spam.
LogRhythm: Azo inoana fa ny adiresy imailakao dia nampidirina amina lisitry ny fanendrena azy. Ny fomba fanao tsara indrindra hanesorana tanteraka an'ity spam ity dia ny fanaovana fahirano ny anaran'ny mailaka nalefan'ny mpandefa Source .